Home Somali News Somaliland: Masuuliyiinta Gobolada Galbeedka Oo Walaac Ka Muujiyay Abaaro Ka Jira Goboladaasi
Masuuliyiinta gobolada galbeedka Somaliland ayaa sheegay in abaar laxaad leh ka jirto goboladaasi, islamarkaana biyo iyo baad la’aani ka jirto dhulkaasi. Abaarta ayaa saamaysay Gobolada Awdal iyo Salel iyadoo sidoo kalena gobolka Gabiley iyo waqooyiga Maroodijeex ay ka jiraan abaaruhu.
Badhasaabka Awdal Maxamuud Cali Saleebaan Ramaax, ayaa sheegay inay Amreen in culimadu Masaajidada ka ducayso islamarkaana Alle Raxmaad la waydiisto lana Akhriyo Ducada Qunuudka “Ma odhan karo, heerka abaarta ilaa hadda dhimasho ayaa jirta, dadka iyo xoolaha midna. Hase yeeshee Harraad ba’an ayaa jira, abaarta marka aan ka waramo abaar baaxad leh ayaa jirta, waana abaar 3-jirsatay. Maanta dalag beereed oo laga filayo in gobolkani uu ka soo go’o beeraha haba yaraatee ma jirto” ayuu yidhi Ramaax.
[quote]Cabdirisaaq Waaberi Rooble, badhasaabka Salel ayaa isna sheegay in abaar baahsan ka jirto gobolka uu Masuulka ka yahay, waxa uu sheegay in hadda ay bilaabanayso dhimashada xoolaha oo dadku ku nool yihiin “Abaartani waxa sababay waa roob la’aan iyadoo aanay kal hore roobabkii xalaysku ka di’in gobolka, gu’giina sanadka kama di’in waa taa arrinta abaarta keentay. Weli ma hayno, wax gurmad ah, hay’adaha iyo xukuumadda midnaba anagu xagayaga dhawaan in aanu iclaan samayno ayaanu doonaynaa, oo aanu baaxadda abaarta gaadhsiino dawladda iyo hay’adahaba, oo aanu u baaqno iyo cid kasta oo danaysa wax u qabashadda umadda. markaa baaxadda abaartu way balaadhan tahay, gurmad degdeg ahna waa loo baahan yahay”, ayuu yidhi badhasaabku.[/quote]
Abaarta ayaa laga dareemay galbeedka iyo waqooyiga Somaliland kadib markii Roobkii Gu’gu baaqday sanadkan, waxaana badi xoolaha loo kaxeeyay Koonfurta Somaliland iyadoo meelaha qaar ay dadka xoolo dhaqatada ahi ka talaabeen xuduudka Somaliland una talaabeen dhul daaqsimeedka Ethiopia.
Goboladda Galbeedka Somaliland
Putland: Madaxweynaha Puntland oo booqday xarumo ku yaala gobolka Bari
Somalia: Xoggo Laga Helay Qaabkii Ay U Dhaceen Qaraxyadii Habeen Hore Ee Muqdisho